Shinoa 1.6m mitete vovoka amin'ny famokarana lamba vita amin'ny lamba sy mpamatsy | Hongli
* Ity andalana famokarana ity dia misy ny extruder tokana, ny bobon-tsodrano mihena, ny fehin-kibo, ny milina fanamafisana ... sns.
* Fitaovana feno avy amin'ny famahanana materialy hatrany amin'ny fofonaina vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba, teknolojia matotra, mihazakazaka tsara, mety hahatratra 95 ary ho ambony ny PFE.
* Ny fahaiza-mamokatra avy amin'ny 1500kg, ny fahafaha-manao famokarana marina dia miankina amin'ny milina extruder ary mampihena ny haben'ny bobongolo.
2.Production Type: Mitsoka mitsangana midina
4. Fitaovana namboarina: PP
5. Width Width: 1600MM
6.Production Fampitomboana: 1500KG / 24Hours
7.Drafitra Max. Speed: 15M / minitra
8. Herin'aratra: 600KW
9.Machine Dimension (LXWXH): 14X5.5X4.5M
Lisitry ny fanamafisana:
1.90 Fanitahana skoto tokana: 1set
3. Fitaovana hafanana alohan'ny hafanana
6.Net Charger miaraka amin'ny karazana fihinanam-pandeha hidirana hidradrama
7.Electrostatic Electret Fitaovana
8.Servo tsy milamina sy manamboatra fitaovana
9.Roots blower sy mitsoka rafitra rafitra
10.Automatic sliting sy fitaovana fanamafisana
11.Siemens PLC mifehy ny rafitra.
1.Installation Video Fanohanana, ary ny fifandraisana mivantana amin'ny horonantsary raha misy fanovana ny olana kely.
2.Fire Spare Spare: singa sasany toy ny konektor, lovia fampangatsiahana, sns.
3.Whole Machine warranty: herintaona
Ny tsindrona mivantana sy ny tsipika famokarana miverimberina vita amin'ny meltblown ho an'ny mpanjifa misy karazana voafaritra manomboka amin'ny 400mm-1600mm. Ny tsipika famokarana famokarana ampiasaina dia tsy ampiasaina ho an'ny famokarana lamba meltblown ihany, fa ho an'ny famokarana fitaovana fanivanana ranon-javatra sy fitaovana fanivanan-drivotra. Ny fitaovam-panasiana ny tsiranoka dia matetika ampiasaina amin'ny sehatry ny fikarakarana ny rano, ny indostrian'ny solika ary ny simika simika, miaraka amina firafitra mitovy, ny filamatsy filtrana avo, ny vokatra miharihary, ary ny fahalotoana mahery vaika mitazona ny fahafaha-manao sy ny asa fanompoana lava. Ireo fitaovam-panamoriana an'habakabaka dia ampiasaina amin'ny rafitra fanadiovana ny rivotra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fanadiovana rivotra anatiny, famolavolana ny fametrahana ny rivotra, ary sns dia misy tombony avo lenta sy fahaiza-manao vovoka avo.
Ny fitsipiky ny teknolojia momba ny fitrandrahana mampihena
Ny dingana vita amin'ny meloka tsy miady dia ny fampiasana rivotra mafana hafainganam-pandeha mba hisintonana ny fantsom-bolo manalefaka polymer avy amin'ny fantsom-pandresena maty, izay namboarina ny fibra ultrafine sy napetraka ao amin'ny efijery fitehirizana na roller, ary avy eo lasa tsy voamboarina amin'ny fifamatoran'ny tena.
Ny fantsom-panamboarana lamba vita amin'ny melt-blène feno dia misy extruder, bieur de gear, vondron-javaboary, vongan-javaboary maty, mpamono rivotra, fitaovana fametahana, iray no mandray net, sivana, andiana elektronika elektrika sy ny iray set of machine milina sy miverina mandeha ho azy. Anisany amin'ireny tapany ireny, ny tena lehibe indrindra dia ny lohany maty an-keriny.
Ny polymer dia mando rafitra fitsinjarana. Ity rafitra ity dia manome antoka fa ny molotra polimerera dia mikoriana amin'ny fomba mitovy amin'ny halavan'ny fitrandrahana miempo ary misy fotoana mitahiry fanamiana, mba hiantohana fa ny meloka nozzle tsy manenona dia manana fananana mitovy fananahana ao amin'ny sakany manontolo. Amin'izao fotoana izao, ny rafitry ny fitsinjarana polimika mitete amin'ny vatan-tsoavaly dia matetika ampiasaina amin'ny fandefasana ireo fantsona. Satria ny rafitra fizarana T-karazana dia tsy afaka mizara ny tsiranoka. Ary ny fitoviana voaroy dia mifamatotra tanteraka amin'ny lohan'ny maty maty. Amin'ny ankapobeny, ny marim-pototra vita amin'ny machining dia maty, noho izany dia lafo ny manamboatra ny maty. Raha ny momba ny fanafanana ny rivotra dia mila rivotra mafana ny tsipika famokarana. Ny famoahana an-tsindry avy amin'ny compressor amin'ny rivotra dia alefa any amin'ny heater ho an'ny rivotra noho ny hafanana aorian'ny dehumidification filtration, ary avy eo amin'ny fivorian'ny fivontosana tsindrona. Ny fanafanana ny rivotra dia vilany fanerena, ary amin'ny fotoana iray manohitra ny fitrandrahana rivotra avo lenta, dia tsy maintsy asiana vy ny fitaovana.
Prototype andalana famokarana indray
400-1200mm voaforon'ny tsipika vita amin'ny lamba vita amin'ny menaka tsofina
Prototype ny serivisy famokarana tariby fampidirana mivantana:
Ny fanamboarana lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny 400-600mm net
Ny fomba fijery mivelatra momba ny maty mihodinkodina
* Fitaovana feno avy amin'ny famahanana materialy hatrany amin'ny fofonaina vita amin'ny lamba vita amin'ny menaka, teknolojia matotra, hazakazaka maharitra, mety hahatratra 9 ny PFE5 ary ambony.
* Fahaiza-mamokatra avy amin'ny 1500kg, ny fahafaha-pamokarana marina dia miankina amin'ny milina extruder ary mampihena ny haben'ny bobongolo tsofina.
1. Modely: HL-1600
2. Karazana famokarana: Hivoatra mihetsika ambany
3. Zintin'aratra: 380V / 3P / 50Hz
4. Fitaovana ampiharina: PP
5. Ambainy vokatra: 1600MM
6. Fahaiza-manao famokarana: 1500KG / 24 Ora
7. Namolavola an'i Max. Speed: 15M / minitra
8. Herin'ny total: 600KW
9. Dimension Machine (LXWXH): 14X5.5X4.5M
1. 90 Fanitahana skoto tokana: 1set
2. Vacuum Hopper: 1set
3. Fitaovana hafanana rivotra
4. Pump pump
6. Net Charger miaraka amin'ny Karazana tsy fiatoana hidradradradro
7. Fitaovana elektrika elektrikazika
8. Servo tsy momba sy manapaka fitaovana
9. Mpanam-bary sy sela mpankafy suction
10. Famonoana sy famandrihana mandeha ho azy Device
11. Siemens PLC mifehy ny rafitra.
1. Fametrahana Video Fanohanana ary ny fifandraisana mivantana amin'ny horonantsary raha misy fanovana ny olana kely.
2. Faritra tsy andoavambola maimaim-poana: ny sasany amin'ny fararano toy ny konofy, takelaka fanorana, sns.
3. Jeneraly warranty feno iray: herintaona
400-600 tsipika famokarana mihosin-tsoavaly